Hiiraan.com maxay u sheegi waysay magaca wasiirka? - SomDaily | Somalia Daily News
Shuban-biyood ka dillaacay Xabsiga Dhexe ee XamarPosted 75 days ago
Heshiiska Puntland iyo dowladda federaalka ahPosted 75 days ago
XERO SHAYDAAN (Qeybta 11-aad)Posted 78 days ago
Doorka warbaahinta Kenya iyo doorashadaPosted 80 days ago
Raysul wasaaraha oo ballan-qaad u sameeyay Ahlu SunnaPosted 82 days ago
Haweenay lagu dilay MuqdishoPosted 82 days ago
Home > Qalin-saxe > Hiiraan.com maxay u sheegi waysay magaca wasiirka?
Hiiraan.com maxay u sheegi waysay magaca wasiirka?
By SomDaily on March 19, 2012
Bogga Hiiraan.com wuxuu ka mid yahay kuwa ugu caansan bogagga internet-ka ee Soomaalida. Dad aqoonyahanno ah oo Soomaali ah ayaa laga soo xigtay inuu boggani ka mid yahay kuwa ugu wanaagsan dhinaca qoraalka iyo dhowrista anshaxa warfaafinta.
Sabtidii la soo dhaafay wararkii uu qoray waxaa ku jiray:
Wasiirka ku xigeenka ayaa soo hadal-qaaday xiriirka Soomaaliya iyo Koonfur Afrika isagoo sheegay inay ka go’an tahay dowladdooda garab-istaaga dadka Soomaaliyeed oo uu sheegay inay in muddo dheer ku jireen dagaallo iyo qalalaase siyaasadeed.
Mahad Cumar Cabdi (Mahad Libaax) oo ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Koonfur Afrika oo kulanka ka qaybgalay ayaa sheegay in dhankooda ay soo dhaweynayaan xiriirka labada dowladood, isagoo ku tilmaamay go’aankaas taallaabo muhiim ah iyo sida ay fursad weyn ugu tahay Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika.
Kulankani ayaa waxaa goobjoog ka ahaa bulshada Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika qaybaheeda kala duwan, iyadoo la is-dhaafsaday aragtiyo iyo sida loogu dhaqan gelin lahaa xiriirkani cusub ee labada dowladood iyadoo jaaliyada ay muujisay taageero buuxa.
Lifaaqa hoose dhag sii si aad u aragto warkan:
Warkan meelna loogama xusin magaca wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Koonfur Afrika, waxaana mas’uulka magaciisa aanay xusin la yiraahdaa Ibrahim Ibrahim. Magaca qofka la soo xiganayo iyo xilkiisa waa muhiim marka la qorayo wararka, sababta oo ah waa markhaati uu ku qanci karo qofka akhrisanaya xogtaada, marka warbaahinta laga hadlayana waa khasab in qofka magaciisa la sheego haddii aanay jirin sabab diidaysa (haddii aanu qofku ka cudurdaaran in magaciisa la sheego)
Marka aad war ama warbixin ka hesho il-wareed, waxaad u baahan tahay inaad u sababeyso ama u aaneyso qof. Waa inaad akhristahaaga, dhageystahaaga ama daawadahaaga u sheegto magaca iyo xilka qofka aad wareysatay ama aad ka heshay xogta.
Saddex arrimood mid un bay noqon kartaa:
1- In qofka warka ku siiyay ama aad xiganayso uu ku qanco in la sheego magaciisa (oo aad sheegto xogta iyo qofka ku siiyay labadaba).
2- Inuu qofku kaa codsado inaad qariso magaciisa sababo jira awgood (oo aad qariso magaciisa, xogtiisana aad isticmaasho) iyo
3- Inaadan isticmaalin qofka iyo xogta uu siiyayba.
Warbaahinta waxaa wanaagsan inay ka taxadarto oo ay ilaaliso xubnaha uu ku ansaxo warka.